Messi oo arimo la yaab leh dartood u diiday in xiddig ka tirsan xulka Argentina uu ciyaaro xitaa hal ilbiriqsi koobkii adduunka!! – Gool FM
Messi oo arimo la yaab leh dartood u diiday in xiddig ka tirsan xulka Argentina uu ciyaaro xitaa hal ilbiriqsi koobkii adduunka!!
Liibaan Fantastic July 13, 2018
(Moscow) 13 Luulyo 2018 Mid kamid ah ciyaartoydii xulka qaranka Argentina ku matalayay koobka adduunka ayaa daaha ka qaaday sir dad badan ka qarsanayd.
Wargayska ka soo baxa dalka Argentina ee Clarin ayaa baahiyay in Messi uu diiday in xitaa hal libiriqsi la ciyaarsiiyo laacibka PSG ee Giovani Lo Celso.
22 jirkaan ayaa kamid ah xiddigaha mustaqbalka fiican ku leh kubadda cagta, laakiin labo arin oo uu sameeyay ayaa ka caraysiiyay Messi taas oo keentay inuu ka codsado tababare Sampaoli inuusan safin xitaa hal daqiiqo kulamadii xulka Argentina ee koobka adduunka.
Messi ayaa u sheegay tababare Sampaoli in qaab ciyaareedkiisa iyo qaab ciyaareedka Giovani Lo Celso uusan ahayn mid isku haboon, tababaraha ayaana qaatay soo jeedinta Messi, balse wargayska ayaa daaha ka qaaday labo arin oo sabab u ahayd in Messi uu u diido laacib kaan in la safo kulamadii koobka adduunka.
Dhacdada koowaad ayaa ah in Giovani Lo Celso uu tuun dheere cajiib ah ka saaray Messi xili lagu guda jiray tababarka xulka, xiddiga Barcelona ayaana si wayn u carooday kadib markii ay ku camirteen ciyaartoyda qaar.
Dhacdada labaad ayaa ah in Giovani Lo Celso uu Messi uga adkaaday tartan kubadda teeniska ah oo dhex maray, 22 jirkaan ayaa orodkiisa ugu faanay Messi kaas oo aad uga carooday labadaas dhacdo ee uu ku sameeyay da’yarkaan.
Ronaldo oo codsigiisii ugu horeeyay ee maamulka Juventus ka dhigay saxiixa laacib kaan!
Tababaraha cusub kooxda Real Madrid Julen Lopetegui oo sii dooqday badalka Karim Benzema